OweChiefs akakhohliwe ubuhlungu ababuzwiswa yiBaroka - Impempe
OweChiefs akakhohliwe ubuhlungu ababuzwiswa yiBaroka
UKearyn Baccus, odlala esiswini kwiKaizer Chiefs, uthi abakhohliwe nakancane ukuthi iBaroka FC yabashwebisa isicoco sePremiership emdlalweni wokugcina weligi ngesizini edlule.
IChiefs yayidinga ukuwina umdlalo wokugcina ukuze imuke nesicoco seligi kodwa yagcina ibambane ngo 1-1 neBaroka ngoSepthemba nyakenye. Lokhu kwakuchaza ukuthi iMamelodi Sundowns iyona eyagcina ingompetha beligi.
Amakhosi azobhekana neBaroka emdlalweni weDStv Premiership, eFNB Stadium, eNasrec, ngoLwesibili ngo-5 ntambama.
“Basanzela phansi emdlalweni wokugcina wesizini, futhi saphoxeka kakhulu. Ngicabanga ukuthi sinokuphoxeka nobuhlungu okumele siye nakho kulo mdlalo, okuzosisiza ukuthi silwe. Ngethemba ukuthi sizowina,” kusho uBaccus.
Uthe uma bebheka i-log yePremiership bayazi ukuthi akuyona indawo abajwayele ukuba kuyona lena abahleli kuyona.
“Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyayibuka i-log masonto wonke. Izinto ziyashintsha zonke izinsuku ngenxa yokuthi kunemidlalo eminingi, ngoLwesibili nangoMgqibelo njalo. Izinto zishintsha ngokushesha. Kodwa asibekile imiqondo yethu kulokho. Sifuna ukubeka imiqondo kulokhu esikwenzayo bese sithola imiphumela. Ngeke sizikhathaze ngabantu abangekho eqenjini lethu,” kusho uBaccus.
Lo mdlali, owazalelwa eSydenham, eThekwini kodwa wakhulela e-Australia, uthe uyajabula ngokuthi usebuyele eqenjini ngemuva kokuhlala amasonto amathathu engadlali ngenxa yokulimala.
“Kuyabuya ukuzethemba kimina njengamanje. Ngicabanga ukuthi namajita aseyaqala ukungena egiyeni, okuyinto enhle. Siyayithola imiphumela emihle manje, futhi yilokho esikufunayo. Akukho mayelana nomdlali ngamunye kodwa kumayelana neqembu lonke,” kuphetha uBaccus.
Ukuwina kweChiefs ngoLwesibili kuzoyibeka emaphuzwini angu-20. Lokhu kuzosho ukuvala igebe emaqenjini azihola phambili kwi-log.
Amaqembu aseqoqe amaphuzu amaningi phezulu, yiMamelodi Sundowns, SuperSport United neSwallows FC abanamaphuzu angu-27.
Previous Previous post: Ngabe seyidayisiwe iTTM? Amahlebezi asho njalo
Next Next post: Zibambene, azidedelani esicongweni seGladAfrica Championship